Forum serasera malagasy Banky lehibe eto Madagasikara MANAO HALATRA AVO LENTA - Dinika forum.serasera.org
Banky lehibe eto Madagasikara MANAO HALATRA AVO LENTA
Fitohizan'ny hafatra : Banky lehibe eto Madagasikara MANAO HALATRA AVO LENTA
essera - 04/12/2009 11:58
Raha niditra ho mpikambana tao amin'ny banky iray lehibe ny tenako 5 volana lasa izay dia vao in-2 monja no nanao virement tao dia banga 180 000 Ar (900 000 Fmg) ny vola tao.
Amafisiko tsara fa banky lehibe izy ity ary tena efa maromaro no tratrany tato ho ato. Raha nangataka aho tany amin'ny voalohan'ny volana septambra ny hijerena hoe iza no naka vola tao amin'ny alalan'ny vidéo de surveillance dia ny directeur miaraka amin'ny gérant-ny compte-ko no niara-nijery ny séquence vidéo satria amin'ny GAB (guichet automatique de banque) no fakako vola.
Tsy nahitana tao na dia olona iray aza tamin'ny daty, ora, minitra, segondra. Amin'ireny vidéo de surveillance ireny moa dia ampahafantarina antsika tsara fa misoratra tsara eo ny daty ora minitra segondra ary ts tapaka mihitsy ny fakany sary fa tsy hoe misy detecteur de présence ka misy olona vao maka sary.
Rehefa ho roa volana taty aorian'ny nametrahako fitarainana ary dia noporofoi'ny zareo tamin'ilay document hoe journal thermique na dia efa niarahanay nahita (directeur, gestionnaire de compte, ny tenako) fa ni-aboutir ny retrait-ko.
Ny fanontaniana napetrany dia hoe nanome code olona ve ny tenako. Tsy tompoko satria mipetraka irery aho. Ny carte de retrait-ko koa miafina tsara en sécurité.
Ankehitriny tompoko io dia lasa nisy sary indray nakako an'ilay vola.
1/ Mitandrema dia mitandrema isika fa ao anatin'ny banque ihany dia efa misy intrus manao piratage bancaire.
2/ Efa mahay manao montage vidéo tompoko ny mpiasan'ny banky ka miala maina ianao raha hanao réclamation eo fa tsy handoa izay volanao efa noviravirain'ny mpiasany ny banque.
3/ Anatra kely, manorata amin'ny taratasy manokana isaky ny manao retrait ianao fa tsy azo antoka intsony tompoko ny relevé alefan'ny banky aminao.
4/ Tena efa tsikombakomba avo lenta be tompoko no ampiasain'ny mpiasan'ny banky amin'izao fotoana
5/ Fadio ny manao retrait imbetsaka fa io no hitako anararaotan'ny mpisoloky. Raha vao be ny opération de retrait ataonao dia araraotiny amin'iny ny fidirany antsokosoko ao amin'ny compte-nao.
6/ Ho an'izay te hahafantatra bebe kokoa ny momba an'izy io dia afaka mifanoratra amiko satria tsy izaho irery no tratran'io fa efa olona maro ary tena mifoifoy volo ianao raha ahazo remboursement. Ary na dia ny fanambaniana ny client aza amin'ny fiteny hoe "vola kely" ataon'ny mpiasan'ny banky dia tena mahamenatra fa dia ny herim-ponao no alaina tsotra izao
sipagasy - 08/12/2009 21:42
raharaha koa izany annnn
ndotofetsy - 10/08/2010 19:41
tonga dia teneno ny anaran ilay banky mba ahafahan ny be sy ny maro mitambatra raha tena manana ny marina ianao ary aza matahotra fa ny marina tsy maty hono
rabaradaka - 01/09/2010 14:48
Ireo banky frantsay ireo ange ka tena mangalatra e